कलियुगका कुरा: February 2011
अफिबाट सँगै निस्केको साथीले हिजो पठाको मेसेज बल्ल आज यसबेला आछ - 'तँ त मस्तिले घर पुगिस् होलास् नि। म त कुबेतबाट फर्केका राष्ट्रपतिको सवारी मार्गमा परेर ४५ मिनेट जति भयो ट्राफिकमा फसेको।' मैले नि खुच्चिङ भनेर रिप्लाई गर्दिएँ। जहिले नि राष्ट्रपतिले शासन लिए देशको हालत सप्रिन्थ्यो भन्छ अब छोड्ला नि आँफै परेसि त्यसो भन्न...
अस्कर पाको फिलिम हेर्न परो
अब यो The King's Speech भन्ने फिलिम हेर्नै परो नि। यो वर्षको अस्करमा बेस्ट फिलिम, डाइरेक्टर र हिरोको तीन वटा पुरस्कार पायो। त्यो फिलिम हेर्‍याछैन भन्यो भने मान्छेले फेरि नगन्ने होलान्। बजारमा पाइएला नि गोडा तीसेक रुपैयाँमा। यो सोसाइटीमा पर्नलाई के के मा हो के केमा पैसा खर्च गर्न पर्ने नि...
अस्ति ब्रायन आडम्सको शो नहेर्दा एक जना साथी धन्नै सोसाइटीबाट आउट भएनन् रे।
ब्रायनलाई नचिनेर खादा अर्कैलाई
ब्रायन आडम्सलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट पुगेका कन्सर्ट आयोजकहरु, विमानस्थलका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु झुक्किएर लगेका खादा जति सबै उनकै ब्यान्डका अर्का सदस्यलाई लगाइदिएर एकछिन हानथाप गरी फोटा खिचा रैछन्। पछि आडम्स आउँदा त उनलाई लगाइदिन त कसैसँग खादा नै बाँकी थिएन रे। कान्तिपुरको साप्ताहिक पत्रिकामा सुब्रत आचार्यले लेखेपछि बल्ल पो थाहा पाइयो। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा....)
महिला समान अधिकारको लागि भन्दै धादिङाँ १६ वर्षीया शुसीला धमलाको आज तीन भाइसँगै ब्रतबन्ध गराइदिएछन् उन्का बाउले। नबुझेको नि यो ब्रतबन्ध केटाहरुले नि नगरेर अथवा केटाहरुलाइ नि नगराएर महिलासँग समान हुने कि सबैलाई ब्रतवन्ध गराएर समान हुने। गाउँका पण्डीत बाले यो कुरा सुनेमा पक्कै कलियुग लाग्यो भन्छन् होला भन्या त झन् पण्डित बा महिलाको नि ब्रतवन्ध हुन लागेकोमा खुशी पो भएका रहेछन्।
'व्रतबन्ध नगर्ने कुरा गरेर हामी बाहुनहरुको पेशालाई थप स‍कटमा पार्ने' भनेर पण्डित बा जंगिदै कराए 'अब समान हुन जनजाति, दलित र महिलाहरुको नि ब्रतबन्ध गराउन पर्छ।' लउ जस जसको जे जे मन छ गरे हुन्छ। कलीयुग लाएकै छ के रे..
बेकाराँ प्रधानमन्त्री भइएछ कि क्या हो भन्ने हामीलाई लाइराछ
'यी नेपालीहरुलाई चित्त बुझाउनै अप्ठेरो। अस्ति नै ७/७ महिना प्रधानमन्त्री भएन भने, कति गोप्य गोप्य सम्झौताको खेल खेलर प्रधानमन्त्री बनें। अब मन्त्रीहरु भएन भन्दैछन्। झन् मन्त्री नभएसी तिनका तलब भत्ता, गाडी, देश, विदेश भ्रमण। पिए सिएको भत्ता, तलब सबै बचिरहेको छ भनेर खुशी हुनु नि। अब सरकार टिकाउन दुई चार जना त्यस्तै मन्त्री थपौं, लउ फन्लालाई मन्त्री बनायो भन्छन्। काम केही नगर्ने पद समाएर बसिरहने (समावेशी) बनाएर २०/३० जना मन्त्री थप्यो भने, यति धेरै मन्त्री बनाए भनेर यिनैले किचिकिच गर्छन् केही गरी सुख छैन यार यो देशाँ' - झलनाथलाई यस्तो कुरा मनमा खेल्या छैन होला भन्ने हामीलाई लागिराख्याछ।
संविधान नलेखिन्जेल जागिर आउने भएसी कसैले संविधान लेख्ला त
'सभासदहरुको जस्तो हुनु नि जागिर नि। सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गर्दिएछ त जहिलेसम्म संविधान लेखिदैंन तबसम्म तिमीहरुको जागिर पक्का भन्दै। आफ्नो त यो प्रोजेक्टको जागिर प्रोजेक्ट थपिने हो कि होइन भनेर वर्षेनी टेन्सन हुन्छ यार' बिहान चिया पसलाँ एउटा साथीले भन्या, अदालतको फैसला पढ्यारहेछ संविधान नलेखिन्जेल संविधानसभा भंग हुँदैन भन्ने।
अब संविधान नलेखिन्जेल जागिर रहिरहने भएपछि कसैले बेलाँ संविधान लेख्न बस्ला त। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने नेपाली नि कोही होला र ?
सम्मानित अदालतले अब सविधानसभाका केही सदस्यहरुको मृत्यु हुन गएमा संविधान लेख्ने काम नसकिएन्जेल त्यसमा तिनकै सन्तानले काम गर्न पाउने पनि फैसला गर्दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाइलाई लाइराछ रे हो
नाच्नलाई तान्नै पर्छ र
अरुले नतानिन्जेल धुम्म परेर बस्ने कसैले तानेर नाच्ने ठाउँ तिर पुर्याएपछि हात हल्लाई हल्लाई कम्मर मर्काइ मर्काई नाच्ने मुन्छेहरु हामी मात्रै हौं कि के हो। कि बिदेश तिर नि नाच्न चाहने तर कसैले कर गर्दिए हुन्थ्यो भन्नेलाई अरुले नै तान्न जान्छन्। विशेषगरी ठूला भुँडी भाका र नेताहरुमा नि यो रोग छ। गाको शनिबार काठमाडौं बस्ने गाउँलेहरुको पिकनिक थियो....
पत्रकार भनेर थर्काउन खोज्छस्!
कान्तिपुर टेलिभिजन शाखामा रहेको पत्रकार महासंघको सदस्यता त्यहाँबाट सारेपछि काठमाडौं शाखा कार्यालय भृकुटिमण्डप जाँदै थिएँ। कार्यालय नजिकै सार्वजनिक शौचालय रहेछ। म जाँदै गर्दा ट्वाइलेटमा पैसा उठाउने एक जना दाजु, 'पत्रकार हुँ भनेर थर्काउन खोज्छस्' भन्दै जंगिदै थिए। पत्रकार भन्नासाथ यसो के रहेछ भनेर सुन्न मन लाग्यो। भएको के रहेछ भने, पिसाब फेरेपछि तीन रुपैयाँ नतिरेर एक पत्रकार महोदयले आफ्नो कार्ड देखाउँदै पत्रकार हुँ भनेछन्। म पुगेपछि ट्वाइलेट कुर्ने ती दाजुले आफू बसेको बेन्च मुनिबाट एउटा पत्रिका निकालेर देखाउँदै भने, 'तैले यो पत्रिका फ्रीमा दिन्छस र, मैले मन्त्री आए त छोड्दिन...'
हजुरबाको कविता छापियो
(हजुरबा लोकनाथ पोख्रेलको कविता आजको नागरिक पत्रिकामा छापिएको छ। कविता तल छ ) साता दिन अगाडि.....
गाउँबाट नजिकका हजुर्बा आउनुभाछ। पत्रिकामा कविता छपाउने मन छ रे। उहाँको तमसुके अक्षरलाई टाइप गरेर पत्रिकाका कार्यालयमा धाउँदैछु। मैले दिंदैमा छाप्दैनन् हजुरबा भनेको गाउँका अर्को कल्ले दियो भने छाप्छन् त भनेर हैरान भयो। म जस्तो भारभुरेलाई त पत्रिकाँ लेख कविता पठाउनेले हैरान पार्छन भने बिचरा सम्पादकहरुको हालत के भा होला....
माइला बा बितेछन्
'बुढाले खेत बन्धके राखी रिन खोजेर छोरालाई अरप पठाए। छोराले अलि अलि बिदेशबाट पैसा पठाएपछि नातीलाई बोर्डिङमा पढाउने भन्दै बुहारी शहर गइ। छोराको कमाईले शहराँ बुहारीलाई बस्न, खान र नातीलाई पढाउन पुग्यो कि पुगेन कुन्नि। यता घरतिर छोराको पैसा त आएन बरु बुहारीको के के खवर आयो। बिरामी बुढाले उपचार नपाएर भन्दिन मन सारै दुखाएर ज्यान फालेका हुन्' केही दिन अगाडि श्रीमान गुमाएकी गाउँले माइली आमासँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो। ...(गाउँको खवर।)
कपालमा कालो दलम् कि के हो ?
यो असमायिक तवरले फुलेका कपालाँ कालो लगाउन्न भन्न थियो। तर आज दुई काकाबीचको वार्तालापले दल्दिम झैं लाओ। कान्छाकाका: दाइ के बुढेसकालाँ नि कपालाँ कालो लाइरा हजुरले। माइलाकाका: तेरो त भए पो लाउथिस् र तँ तालुखुइले भइस् भनेर मेरो भाको कपालाँ लाको कालोको किन रिस गर्छस्? माइलाकाकाले मलाई हौस्याछन् दले हुन्छ बाबु भइन्जेल, भोलिपर्सी तालुखुइले भएसी कालो दल्न कहाँ पाउँछस् र...( हसाँउछन् बुढाहरु)
देको उपहार लिन भन्दा रोज्न झन् गार्हो रैछ
सँधै अरुले जे उपहार दिन्थे, त्यही लिइन्थ्यो र धेरैजसो के दिया होला यस्तो बरु यो किन्ने पैसा दिया भए कति राम्रो चिज किनिन्थ्यो भनेर कुरा काटिन्थ्यो। अस्ति एक मित्रले '२० डलर सम्मको सामान नेपालको कुनै सपिङ अनलाइनबाट तपाइले छान्नु र इमेल गर्नु मेरो तर्फबाट उपहार' भन्याछन्। तर अहँ अहिलेसम्म केही छान्न सक्याछैन, यति दोमन त बिहे गर्न केटी छान्ने बेलाँ नि भाको थिएन...
पुलिसले नै लुटेरा भएसी नि के भन्ने
हिजो राति प्रहरी भ्यानमा गस्तिमा हिडेका सई नेतृत्वका चार पुलिसले झम्सिखेल र कुमारीपाटीमा नाइट ड्युटीबाट फर्केका बटुवाको सिक्री र पर्स लुटेको सम्चार पढेनछन् कि के हो ? गृह मन्त्रालयका उपसचिव हरिकृष्ण पोख्रेलको घरबाट आज बिहान सुनका गरगहना र ल्यापटप चोरी हुनासाथ पुलिसलाई बुझ्न पठाछन्.... झन् भाको अरु सामान नि के के हराउँछ अनि थाहा पाउछन् बल्ल.... (आफूले त सल्लाह मात्र दिने हो अरु क्यार्न सकिन्छ र...)
प्रचण्डसँग नाटक गर्न सिक्या होलान् त झलनाथले
झलानाथले कतिको नाटक गर्न जानेका छन् कुन्नि ? कोही कोही नेता भा त एमालेको आजको स्थायी समितिको बैठकमा रोइदिन्थे होलान् के पी र माधव नेपालको पाउ छोए झैं गरी- 'लउ तपाइहरुले नै प्रधानमन्त्री छोड भने छोड्छु। गृह मन्त्री नदिई माओवादी नआउने भए। कि पद छोड् भन्नुहोस् कि यसपालिलाई स्वीकार्नुहोस्' भन्दै। अब झलनाथको बानी धेरै थाहा छैन के गर्छन् कुन्नि...
मैले यसो भनेर प्रचण्डलाई व्यङ्य हानेको मरेनी हैन क्यारे। बर सत्य चाहिँ के हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भा भए र एमालेलाई गृह मन्त्री दिने बारेमा यस्तै बिबाद भा भए प्रचण्ड पक्कै पार्टीको आन्तरिक बैठकमा रुन्थे र त्यस्तै भन्थे अनि बाबुरामले नोट अफ डिसेन्ट लेख्थे तर पनि प्रचण्डले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन आफ्ना पदाधिकारीहरुलाई सहमति गराउँथे।
अब दबाब दिएर संस्थाको प्रचार गरम्न
संविधानसभाको म्याद थपिएको यतिका समयसम्म संविधानसभासँग सम्बन्धित सिन्को नभाँचिदा पनि कुनै संघसंस्थाले निरन्तर संविधान सभा घेरेनन्, जुलुस निकालेनन्। अब ती संस्थाहर्ले आजट सय दिने काउन्डडाउन गर्छन् अनि महिना/१५ दिन जति बाँकी भएसी बेलाँ संविधान बनाउन पर्छ भनेर संविधान सभाध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिन्छन् र क्यामेरावालाहरुलाई बोलाएर टिभीमा देखिन्छन्। अनि लास्ट एक दुई दिनाँ धर्ना देर आफ्नो संस्थाको प्रचार पत्रिकामा गराउछन्। हामी सबै नेपालीले तपाइरु जस्तो संस्थाहरुलाई चिनिएको छैन के रे.....
ब्रायन आडम्सको कन्सर्टले हावा खान्छ कि के हो...
ब्रायन आडम्सको कन्सर्ट दिल्लीआँ झैं यहा नि हावा खाला जस्तो छ कि क्या हो। एक त खेलकुद परिषदकाले घुस मागेको कुरा आयो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज किन्न त रोक्ने अख्तियारले कन्सर्ट नि रोक्ला घुसैको कुरा आएसि। फेरि कहिलेकाही मात्र मिलाउने मौसम विभागले नि शनिबार सम्म झरी रहनसक्ने अनुमान गरेछ। अनि भारतीय राजधानी दिल्ली पुलिसले दिन नसकेको सुरक्षा हाम्रा पुलिसले चाहिँ दिने भएछ त कन्सर्टलाई। आफ्लाई त भए पो के नभए पो के मरे नि गइदैंन भनेर भन्नु नि भएन धेरै साथीभाइले दुई चार हजार फालिसके...फेरि आँफू आफ्नो भन्दा अरुको चिन्ता गर्ने मानिस परियो।
बत्ती आयो कि नानीहरु टिभी भित्रै छिर्न खोज्छन्
'बत्ती आयो भने नानीहरु टिभी भित्रै छिर्छन् कि जस्तो गर्छन्' पहिले पहिले कसैले यस्तो भन्दा कस्तो बच्चा फकाउन पनि नजान्ने बाउ आमा रछन् भन्या जस्तो लाग्थ्यो।
आफ्नै छोरीहरुले त्यस्तो गर्न थालेसी थाहा भो, केटाकेटीलाई फकाउन कति गार्ह्रो हुँदो रहेछ। नहेर भनेर राम्रो मुखले भनुम् सम्झाम् हाँसेर टार्दिन्छन्। किताब किनेर ल्याइदियो, एउटा कुनामा थन्क्याइदिन्छन। सँगै गफ गरेर भुलाउँ भन्यो ध्यानै दिन्नन्। अलि ठूलो स्वरले हप्कायो भने आँखाभरी आँशु पारेर पिलपिल गर्छन्। खै के गर्ने गर्ने ? ...नमरी स्वर्ग देखिन्न साथीभाइ।
लोडसेडिङले गर्दा टिभी हेर्न नपाउने हुँदा यसपटक नानीहरुको पढाई अलि राम्रो हुन्छ कि भनेको त, हिजोदेखि परेको पानीले होला फेरि वत्ती आउन थाल्यो बेला न कुबेला।
प्रीय तिमीलाई मेरो भ्यालेन्टाइनको उपहार
दुई दिनपछि संसारभरका आधुनिक हुँ भन्ने धेरै प्रेमीहरुले भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदैछन्। प्रणय दीवसकै लागि धेरै बोटबाट गुलाबका फूल छिनिइसकेका छन्, शहरका फूल र कार्ड पसलमा ती पुग्दै होलान्। खोई किन हो मैले यसपटक बोटबाट छिनालिएको गुलाबको फूलमा तिमीसँग प्रेम व्यक्त गर्ने आकर्षण देखिन। आर्चिज ग्यालेरीमा पाइने बेलुनको मुटुले तिमीलाई प्रणयको सन्देश दिन सक्छ भन्नेमा मलाई शंका छ। त्यसैले यो पत्र तिमीलाई प्रणय दीवसको मेरो उपहार।
कविता छपाउन आइपुग्नु भो हजुरबा
जुत्ता ठूला, श्रीमती सानी किन
फुपुको छोरीको बिहेमा गतिलै बनेर जान परो भनेर नयाँ छालाको जुत्ता किनेर लाइयाथ्यो। यता उता अलिक चल्न परो। गोलीगाँठो मुनिको छाला खोस्रिएर टट्याएकोछ, बुढी औंलाको नङ उप्केला झैं भाछ। बुढापाकाले जुत्ता रोज्नु ठूलो, श्रीमती खोज्नु सानी भन्थे। पहिलोको त महत्व बुझियो यो श्रीमती चाहिँ किन सानी खोज्नु भनेका हुन् पत्ता लाउन सक्या छैन। लउन कसैलाई जानकारी भए था पाम्....
नाता पत्ता लगाइयो आज। मेरा फुपुको देवरको मामा ससुराले आफ्नी बहिनी झलनाथको भाइलाई दिनुभएको रहेछ। आफ्नो नातेदार नै परे। साँच्चै यतिको सम्म नातेदारलाई हेर्छन् कि हेर्दैनन् नेपालका नेताहरुले। नेपालाँ नातावाद खुब छ भनेको त सुनेको हो...
कोकको बोतलबाट घिउ कसरी खन्याउने
हिजो साँझ घर आउँदा हैन यो छ्याङ जस्तो कल्ले के पठाएछ घराँ भनेर तर्सियाथें। आमाले हर्लिक्सको सिसी नपाएर होला कोकको बोतलाँ हालेर गामबाट घिउ पठाउनुभा रैछ। प्लास्टिकको बोतलाँ धेरै बेर राख्न हुन्न होला भनेर हर्लिक्सको सिसाँ घिउ खनाउन खोज्या, तताउँदा पुरै बोतल डढ्ने, घाममा सुकाउँदा नि पुरै ननिख्रिने रैछ। केही उपाय छ कोकको बोतलमा भएको घिउलाई कसरी खन्याउने हो ? सारै टेन्सन भयो यार। लउन...
झल्लु को प्रचण्ड, झलनाथ कि दीपक
प्रचण्डले अस्ति - प्रधानमन्त्री छोड्ने हुम् हामी, जाबो कुनै एउटा मन्त्रालयका लागि अड्डि लिन्नम' भनेको यही आँखाले टिभीआँ हेर्याझैं र कानले सुने झैं मान्छु। तर गृह मन्त्रालय नपाएसी सरकारमा नै नजाने भनेर हिजो माओवादीले निर्णय गरेछन्। चुनाव हारेकालाई मन्त्री बनाउन्न भनेको पाँच दिनपछि झलनाथले दुई जना पराजितलाई नै मन्त्री बनाए। हैन मैले बुझ्न नसकेको कुरा नि, झलनाथको संगतले प्रचण्ड झल्लु भा कि प्रचण्डको संगतले झलनाथ झल्लु भा हुन् ? कि नेपाली नेताहरुको यत्रो संगत गर्दा नि नेताले भनेको कुरा गर्दैनन् भनेर नबुझेर, बोलेको पुर्याउलान् भनेर पत्याएर बस्ने म पो झल्लु भा हुम्....
(बोलेको कुरा नपुर्याउनेलाई झल्लु भन्न पाइएला नि। अघि स्टेटसमा त ठोकेर लेखिहालियो 'झल्लु को भनेर'। फेरि कानून लाग्ने हो कि भन्ने डर छ। आजभोलि के के नयाँ नयाँ कानून बनाइराछन्। फेसबुकाँ नि कसैको चरित्रहत्या गर्ने गरी लेख्न नपाइने छ रे। मैले त नेपाली वृहत शब्दकोषमा हेरेर लेखेको हुँ है। झल्लु - (विशेषण) बोली वा बानी बेहोराको ठेगान नभएको।)
झलनाथ झैं झोक्राएर
प्रधानमन्त्री बन्नु/बनाउनु भन्दा मन्त्री बनाउन पो गारो भयो जस्तो छ नि साथीहरूलाई... यसबारेमा हास्नु पर्ने कारण देख्दैनन् कि के हो फेसबुके मित्रहरु...कोही कोही त्यसै झोक्याएर बसेका छन् त झलनाथ झैं..
पत्रकारले सभासद् भन्लान र...
पत्रकार साथीहरुले गोदाई खाने हो कि भन्ने पिरमा छु यार म त। पत्रकार महासंघले 'पार्षद' भनिने केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई विधानै संशोधन गरेर 'सभासद' भन्न थालेछ। ६०१ सभासद्‍बाटै वाक्क भाका जनताले १२ सय जति सभासद (पत्रकार) थपिए भन्ने सुन्दा के भन्ने हुन्? कुनै पत्रकारले कतै गर म नि सभासद हुँ भन्ला र अनि भेट्छ। विचराले म त पत्रकार महासंघको पो सभासद भन्न नभ्याउँदै कुटाइ खायो भने, होस अरम है मित्रहरु..
झलनाथ आँफै झल्लु हुन खोज्या कि पार्टीले बनाउन खोज्या
संविधानसभाँ चुनाव हारेकालाई सरकारमा ल्याउन्न भन्थे प्रधानमन्त्री हुनासाथ झलनाथ खनालले। अर्थमन्त्री बन्ने पक्का भाका भरतमोहन अधिकारी मोरङबाट र शिक्षामन्त्रीमा प्रस्तावित गंगालाल तुलाधर धादिङबाट चुनाव हारेका रैछन्। आँफै झल्लु हुने कुरा किन गर्छन बेकाराँ झलनाथले कि उनैको पार्टी एमालेले नै सुरुमै चुनाव हारेकाहरुलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेर झलनाथलाई झल्लु बनाइदिन लाको हो...
माओवादी मन्त्रालय छनौट; सहकार्य कि विद्रोहको गृहकार्य
घुस नखाने वर्त
‎'धन्न तपाई यो काउन्टरको लाइनमा पर्नुभछ अन्त पर्या भए। आज मेरो बार्ने दिन परेर नत्र यतिका समान चिया खर्च नलिइकन कहाँ दिन्थें र' विदेशट आको पार्सल लिन हुलाक पुग्दा त्याँका कर्मचारीले विदेशीसँग बिहे गर्ने मेरा साथीलाई भने रे। तिन्ले सोध्दैछिन् 'गणेशको पुजा गर्ने मंगलबार कसैकसैले खाना, माछा-मासु नखाने त सुनेकी थिएँ। घुस नखाने पनि हुँदारछन् है दाइ?' सरकारी काम अब मंगलबार है बा त्यस्तै कर्मचारी फेला परिहाल्छ कि...
ब्रायन आडम्सको बारेमा खोज्दै
ब्रायन आडम्सको विषयमा सर्च गर्दैछु, गुगल युटुब तिर। माइक्राँ हिजो कन्डक्टरसँग दुई रुपैयाँ भाडामा किचकिच गर्नेले रंगशालाँ अर्कान साता हुने आडम्सको कन्सर्टाँ जान पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न तयार भएको सँगैका सिटकालाई बताउँदै थिए। तिनीसँगै बसेकाले सोध्दैथे- नेपालीमा गाउँछन् र तिनले ? अस्ति एउटा जमघटमा तिन्को कन्सर्टमा नजानेको लिस्टाँ आफ्नो मात्र नाम परेपछि चित्त दुख्यो। 'सोसाइटी'मा विकिन्न जस्तो छ यो पाराले...
माने यार मन्टेश्वरी खोल्नेहरुलाई
माने यार यी मन्टेश्वरी खोल्नेहरुलाई। वसन्त पञ्चमीका दिन तीन वर्षकी छोरी लिएर गाका आफन्तलाई २० हजार भर्ना फि र ८ हजार मासिक फिमा फसाएछन्। बाउलाई जति पिर भए नि छोरी भने दंग छे। स्कुलबाट २५ रुप्पै जति पर्ने खेलौना कार र चकलेट दिएर घर पठाएछन्। स्कूलले खेलौना र चकलेट दियो भन्दैछे। 'स्कूल दानी होइन नानी, तेत्रो फिस लिनेले खेलौना दिनदिनै दिए नि केही हुन्न। तेरै बाउको पैसा हो' भनेर फुच्चीलाई कसरी बुझाउनु...
१९ अर्ब घाटा र १४ घन्टा लोडसेडिङ त्यस्सै हुन्न
विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नदिए पनि सबै जस्ता ठूला नेताहरुलाई गाडी दिएको छ शहरमा चल्ने मध्येका सबैभन्दा महंगा महंगा। जिल्लामा पनि तिन्का कार्यकर्ताले प्राधिकरणको गाडी मात्र चढ्दैनन्,नेता गाबेलाँ जलविद्युत विद्युत आयोजना भाठाउँमा गर प्राधिकरणकै खर्चमा भोजभतेर नि गर्छन्। हुँदा हुँदा प्राधिकरणले हिजो मन्त्रीको बिदाईमा पाँच तारे होटल अन्नपूर्णमा गर कक्टेल भोज दे'छ र बील मध्यमर्स्याङ्दीले भर्ने भ'छ। त्यस्सै १९ अर्ब घाटा र १४ घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ र...
कुट्नेको समस्या समाधान हुने भएपछि...
ल झलनाथले बिताए। बिबिसी नेपाली सेवामा भनेको सुन्नुभो - 'जुन मान्छेले मलाई झापड हाने, ती मान्छेले झापड हानेर आज मलाई बालुवाटार पुर्‍याइदिए। मैले त उनलाई धन्यवाद दिएको छु। म रेग्मीलाई आव्हान गर्छु कि आउनुहोस् मसँग बसेर गफ गर्नुहोस्। तपाईंका समस्या केही छन् भने म समाधान गर्न सहयोग गर्छ।' प्रमले नै यसो भनेपछि समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने त बुझ्नुभो होला। तपाई हामी समस्या हुनेहर्ले बुझेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएन त ? खनालको भनाइका कारण अरु नताले कुटाई नखाउन् मेरो कामना ...
झलनाथले परिवार नियोजन विरोधी नीति त नल्याउलान् नि
परिवार नियोजनले गर्दा आजभोलि जेठा-कान्छा वा जेठी-कान्छी मात्र जन्मिने बेलामा माइला-साइलाँ नै लोपोन्मुख वर्गमा परिसके। तर यस्तो समयमा पनि नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जन्तरेको इज्जत राखे। परिवार नियोजन कम्पनीमा काम गर्ने एक जना साथीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् - कतै झलनाथले परिवार नियोजन विरोधी नीति त ल्याउँदैनन् होला नि।' यिनका बा-आमाले २,३,४,५ हैन ६ सन्तानमा मात्र चित्त बुझा भए, न यी जन्तरे जन्मन्थे न हाम्ले ३४ औं प्रधानमन्त्री पाउन यति ढिला हुन्थ्यो...
माओवादीसँ नि, काँग्रेससँ नि र राजासँग नि सत्तामा
प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर नि सत्तामा। प्रतिगमन पुरा सच्चियो भनेर नि सत्तामा। गणतन्त्र आए नि सत्तामा। माओवादीसँग नि सत्तामा, काँग्रेससँग नि सत्तामा, राजासँग नि सत्तामा। भारतको समर्थनमा नि सत्तामा, भारतको विरोधमा नि सत्तामा। कोही कोही एमालेगणलाई डर होला यसरी सरकारमा बसिरह्यो भने एमालेले अर्को चुनावमा कति सिट ल्याउला। सरकारमा बस्नेलाई रुचाउँदैनन् नि जनता...
झापडले नै झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनायो.
झापड कान्डपछि नेताहरुको सातो गएको पुष्टि गरे है प्रचण्डले संसदमा भाषण गर्दै। अहिले पनि सरकार दिन सकिएन भने जनताले झापड मात्र होइन जुत्ता पनि हान्छन् भन्ने डर छ। त्यसैले झलनाथलाई समर्थन गर्न परो भन्ने आशय व्यक्त गरे स‌सदमा - 'निर्वाचन फेरि परिणामविहीन हुने देखे‌, अहिले त जनताले १-२ थप्पड हानेका छन्। अब पनि चुन्न नसके जुत्ता हान्ने स्थिति आउँछ भनेर खनाललाई मत दिन भयौं।'
भनेपछि झलनाथलाई झापड कान्डले नै प्रधानमन्त्री बन्न सहयो गर्यो भन्ने कुरा एक तर्फबाट त पुष्टि भयो नि।
गाउँमा जैसी बाले भन्दैछन् रे देख्यौ! बाहुनको हातले कति फाइदा गर्छ, झलनाथलाई रेग्मीको झापड कति फाप्यो...
आन्दोलनको मौसममा नेपालका माओवादी सत्तामा
1. आन्दोलने ट्युनिसियामा २३ वर्षदेखि शासन गरेका जिनेअल अविदिनेलाई सत्ताबाट मात्र हैन देशबाटै लगार्यो।
2. आन्दोलनले इजिप्टमा होस्नी मुबारकले आउने असोजमा सत्ता छोड्ने बताइसके पनि छिटो सत्ता छोड्न दबाब दिदै आन्दोलन जारी छ।
3. आन्दोलनकै कारण यमनमा अब्दुल्ला सालेहले चुनाव नलड्ने र छोरालाई पनि राष्ट्रपतिमा नलडाउने बताइसके।
4. सिरियामा आन्दोलनको तिथी आइसक्यो। यहाँ आन्दोलन भए झन् रक्तपात हुने अनुमान छ।
5. आन्दोलन चिनतिर सोझिन सक्छ भन्दै चिन सतर्क।
6. नेपालमा विद्रोह गर्ने भनेका माउवादीले के सोच्दै होलान्.... (झन् सत्तामा पो त)
घरबेटी असल भए घर थपिन्थेनन्
‎'काठमाडौंका घरबेटीहरु मात्र असल भइदिए पनि यति धेरै घरहरु बन्थेनन्' घरबेटीको व्यवहारले गर्दा कोठा खोज्दै हिंडेकी एक जना सँगिनीले भनेकी। ध्रुवचन्द्र गौतमको कुनै किताबमा पढेकी हुन् रे उन्ले यो लाइन। त्यतिखेर त ठीकै लाथ्यो रे। अहिले चाहिँ मर्मस्पर्सी नै लाग्छ रे...
इखले घर बनाउने होलान् र काठमाडौ‌मा ?
गाउँको एक मात्र पत्रकार हुनुको मजा
गाउँको एक मात्र पत्रकार हुनुको रमाइलो नि कम छैन। अरु बेलाँ नसम्झनेले नि पासपोर्ट हराएको विज्ञापन पत्रिकाँ छपाउन परो भने सबभन्दा पहिला सम्झन्छन् नि ...
काठमाडौं कसैकसैले जग्गा बेच्न पर्‍यो भने नि सम्झन्छन्...
कसैले विद्यालयलाई दुई हजार रुपैयाँ दान दिने भोर पत्रिकाँ समाचार आए हुन्थ्यो भन्ने लागे नि सम्झन्छन्...